1Password 8: Ikozvino yave kuwanikwa muruzhinji beta yayo incredible update | Nhau dze iPhone
Ngirozi Gonzalez | 15/04/2022 13:00 | IPhone maapplication
La kuchengetedzwa kwemaakaundi edu Izvo zvakakosha kuti ruzivo rwedu rwemushandisi ruve runoshamisa. Kuti vavandudze chiitiko ichocho, vakagadzira password mamaneja izvo zvinotitendera kuti tizvichengete zvese, gadzira mapassword akachengeteka uye yakareba etcetera. Mazhinji emaneja aya ari mukati meanoshanda masisitimu asi mamwe maapplication ekunze. Senyaya ye 1Password, iyo inonyanya kufarirwa password maneja. Vagadziri vayo vakagadzira 1Password 8, iyo inotevera hombe vhezheni yeapp yeIOS uye iPadOS ine dhizaini nyowani uye maficha ane simba atichakwanisa kuyedza kuburikidza neruzhinji beta iripo ikozvino.
1 Dhizaini nyowani uye dhizaini shanduko mu1Password 8
2 Dzimwe nhau dzichaona chiedza munguva pfupi
Dhizaini nyowani uye dhizaini shanduko mu1Password 8
Haisi nhau yekuti 1Password yanga ichishanda pane vhezheni 8 yeapp yayo kwemwedzi mishoma ikozvino. Muchokwadi, iyo beta vhezheni ye1Password 8 yeLinux, Windows, uye macOS yakaburitswa mavhiki mashoma apfuura. Zvakadaro, iOS uye iPadOS yanga isati yave neyakagadziridzwa application kana zviratidzo zvipi nezvipi zvekuti yaizoonekwa munguva pfupi. Asi zvese zvakachinja mazuva mashoma apfuura AgileBits, mugadziri, yakaburitsa beta ye1PassWord 8 yeIOS uye iPadOS mune yeruzhinji beta fomati.
Huwandu hukuru hwezvinhu zvitsva uye mabasa matsva haaizokwana mune imwechete post. Nekudaro, isu tichataura nezve shanduko huru yekukubatsira iwe kuona kuti iyo app yakashanduka sei kuita yainoti ndiyo yakanakisa password management app pamusika. Chekutanga: 1Password Core. AgileBits inotaura nezveCore yayo nyowani semoyo weapp yayo inokwanisa kubata mabasa ese uye nekubatanidza mashandiro pakati peanoshanda masisitimu.
Iyo itsva app yakanyorwa mukati SwiftUI uye Rust kubvumira shanduro yekupedzisira kuti ive yakagadzikana, inobudirira uye yakachengeteka kudarika kare. Iyi Core yatiri kutaura nezvayo inobvumira, sezvatataura, kuita zvakasiyana-siyana pakati peanoshanda masisitimu kana mapuratifomu. Saka ese maficha edesktop vhezheni achave pane yako iPhone kana iPad.
Yechipiri inonyanya kukosha ndeye dhizaini yayo itsva yakabatana. Iyo itsva mushandisi interface inobatana zvakanyanya pamapuratifomu uye inotitendera kuti tifambe nemumasesheni akasiyana siyana tisinganzwe sekunge tiri pane chimwe chishandiso. Yazvino, nyowani uye inoshanda vhezheni ndiyo yavakawana mu1Password 8.
Sechitsva tinewo a personalized home screen pane iyo iPhone uye netsika sidebar pa iPad. Ndokureva kuti, mushandisi achasarudza chavanoda kuva nacho pavanenge vangopinda 1Password. Iri ipfungwa yakanaka sezvo paine vashandisi vazhinji vasingashandise ese mabasa anowanikwa muapp uye kuva nawo pamberi pevamwe vanoshandisa zvakawanda kwaive kunonoka.
Yakashandurawo magadzirirwo e 1Password 8 pane iPadOS. Chimiro chakavakirwa pamakoramu matatu, imwe yacho bhari yepadivi, inobvumira kufambiswa kwebasa kunoshanda. Uye zvakare, ivo vanova nechokwadi chekuti iyi yekuvandudza inobvumira yakanyanya dhizaini mune yega yega modhi: iPad Pro, iPad Mini, iPad, nezvimwe. Ukuwo, kusanganisirwa akapfuma multitasking maonero mukati meSplit View uye Slide Over.
Pakupedzisira, zvinotarisirwa Nharireyomurindi. Icho chishandiso chinobvumira zivisa mushandisi nezvekutyorwa kwepassword uye matambudziko ekuchengetedza nezvinhu zvakachengetwa. Watchtower inodyisa pakudonhedza uye dhatabhesi kutizivisa kana maakaundi edu akakanganiswa. Pamusoro pazvo, rinotizivisa zvatinofanira kuita uye kuti tinofanira kuzviita sei kuti tigadzirise dambudziko racho nokukurumidza.
Dzimwe nhau dzichaona chiedza munguva pfupi
Kubva kuAgileBits vanovimbisa izvozvo mabasa mazhinji uye zvitsva zvakasiiwa mupombi nekuti havana kupasa mhando yekucheka. Nekudaro, timu ichiri kushanda kuti iwane ese maficha mubeta yekupedzisira kuitira kuti avepo mune yekupedzisira vhezheni ichaburitswa gare gare gore rino.
Kuti uwane beta, ingoisa TestFlight uye uwane purogiramu yebeta ye1Password 8. Tichatsanangura nhanho nhanho mune chimwe chinyorwa mumaawa mashoma anotevera. Panguva ino, tinogona here kushandisa 1Password 7 inowanikwa paApp Store:
1Password - password Manejavakasununguka
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Incredible 1Password 8 update ikozvino yave kuwanikwa muruzhinji beta
Twinkly Dots, iyo nyowani inoshanduka yakazara LED strip